China Runjin © Krunt ™ -N2000 Ice Cream Igwe Igwe Igwe na rụpụta na ụlọ ọrụ | Runchen
Gwakọta slurry na ikuku ma kpoo iji mepụta ude mmiri. Igwe ahụ nwere ike iji aka ya rụpụta ice cream na-arụ ọrụ na-akpaghị aka. Ọ dịkwa irè maka oke oyi nke ngwaahịa ndị na-abụghị ice-cream.
Frunt ™ -N2 na-aga n'ihu-na igwe kpamkpam kwekọrọ na 3-A ahụ ike nke
Foodtù Na-ahụ Maka Nri na Mmiri ara ehi na-enye nri, USA.
Eku, efere nche na sistemụ ikuku dị jụụ nke igwe ahụ bụcha igwe anaghị agba nchara. Akụkụ niile na-akpọtụrụ ihe ndị na-agwakọta ya na ice cream bụ nke ihe igwe anaghị adị ọcha ma gbanwere.
Echichi Igwe na-agba oyi nwere ike jikọta ya na ike ọkọnọ, igwe jụrụ oyi, ikuku na slurry.
Mmiri oyi Igwe oyi na-eme ka nickel dị ọcha, nke nwere mgbidi chromium siri ike na nke dị larịị, nke na-enye mgbanwe ọkụ na-ekpo ọkụ na mmetụta dị egwu maka ihe ngwakọta nke ice cream.
Jụrụ sistemụ Iji nye ike kwụsiri ike iji hụ na ice creams nwere ọnọdụ kwesịrị ekwesị ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe. Mgbe igwe kwusiri ma ọ bụ sistemu jụrụ oyi mechiri emechi na mberede (dịka ọmụmaatụ, mmechi mberede), a na-eji amịrị ammonia na-ekpo ọkụ gbochie oyi. Mmiri amonia kwesịrị ịbụ nke afụ na nrụgide ekwesịghị ịdị ala
karịa 4 mmanya (58 psi). Igwe na-ekpo ọkụ nke igwe na-ekpo ọkụ bụ -34 ℃ (-29 ℉).
Drivegbọala A na-ebufe usoro ịkwọ ụgbọala site na isi moto na blender site na eriri belt.
Isi mmiri na tinyekwa mgbapụta Ọ bụ otu igwe nke gia mgbapụta. O nwere ike ịkwụ ụgwọ ejiji nkịtị site na ịhazigharị ọdịiche ahụ. A na-emeso elu dị n'ime mgbapụta nchara nchara na usoro pụrụ iche iji belata nkedo na akwa.
Kwụsịtụ Kwụsị igwe n'oge na-adịghị anya n'oge nrụpụta iji hụ na ntakịrị mfu nke ihe ndị na-eme ice cream na nkwụsi ike nke ogo ahụ.
2000 lita kwa awa (galọn 528 US)
Mmepụta sitere na ọnọdụ ndị a:
Ọnọdụ ntinye nke slurry +5 ℃ (+41 ℉) Ọnọdụ nrụpụta nke ice cream -5 ℃ (+23 ℉) Ọnwụ okpomọkụ -34 ℃ (-29 ℉)
Mkpụrụ mmanụ na amonia <30 PPM Mgbasawanye 100%
Ọnọdụ nke slurry Ohaneze slurry nke ice cream nwere 38% ihe siri ike. Outputmepụta n'ezie na iwepụta okpomọkụ dị n'okpuru usoro nke ice cream.
Ọkọlọtọ imewe E wezụga usoro ọkọlọtọ a kpọtụrụ aha, Frunt ™ -N2 gụnyekwara ihe ndị a.
Abịakọrọ ikuku Jikwaa mmụba ọnụego na CIP mgbapụta (ma ọ bụrụ na enyere ya) na abịakọrọ ikuku. Njikwa panel A na-arụ ọrụ niile nke akụrụngwa a na panel a, gụnyere nlele nlele maka akụrụngwa moto, manomita ikuku, mgbapụta, bọtịnụ ON / Gbanyụọ nke isi moto, ihe ndozi maka ịchịkwa jụrụ na nrugharị nke mgbapụta slurry.
Mgbapụta ụgbọala Ike nke ịkwanye na ịmịpụta mgbapụta sitere n'aka onye na-ahụ maka moto gia site na ntụgharị ntụgharị. Enwere ike ịtọ njikwa njikwa nke ọsọ ọsọ nke ịchapụta na ịgbapụta mgbapụta ka ọ bụrụ 10-100%.
Ike nke agwakọta mgbapụta 120-1200 liter slurry kwa awa (32-317 US galọn).
Ọkọlọtọ akụkụ mapụtara A set nke akụkụ ahụ mapụtara na ngwaọrụ, belt wiil ndị ịgbanwe mgbali nke kefriza tube na belt wiil ndị iji belata agwakọta ọsọ na-gụnyere.
Ngwa nhọrọ ndị eji Frunt ™ -N2 Ihe na-agbakwunye mgbapụta
Iji kpanye mmiri na-esi ísì ụtọ na palettes na-enweghị mmiri nke ihe siri ike n'ime ọkpọ mmiri oyi.
Tee pistin valvụ Ejikọtara na ọkpọkọ mmepụta nke ice cream
Ngosipụta nke ihapu nsogbu Ejikọtara na ọkpọkọ mmepụta nke ice cream Ngosipụta nke ihapu okpomọkụ Ejikọtara na ọkpọkọ mmepụta nke ice cream Na-aga n'ihu n'ihu (dị n'ime)
Akpụrụ ude nkewa Kesaa ude ice cream ndị ewepụtara na ahịrị abụọ dị iche iche ma jupụta ice creams
Mberede Kwụsị valvụ Maka usoro jụrụ oyi
Freon ngwa Enwere ike gbanwee ya ka ọ daba na ụdị igwe ụdị Freon, nke nwere ntakịrị mmetụta na ikike.
Enyemaka valvụ TüV A ga-etinye valvụ enyemaka ahụ na sistemụ jụrụ ọkọlọtọ iji kwekọọ na ọnọdụ jụrụ oyi nke mpaghara.
Mme agụụ mmekọahụ mapụtara akụkụ Ejiri maka mmezi oge 3000 ma ọ bụ 6000
Isi moto 22 kilowatt
Mgbapụta moto 1.5 kilowatt
Standard ike ọkọnọ 3-adọ 380 V, 50 Hz amonia pipeline:
Mpụga ikuku nloghachi anwụrụ 76 mm3 anụ ọhịa ahụ
Mpụga mmiri mmiri mmiri anwụrụ 20 mm3 / 4 anụ ọhịa
Ikuku ikuku ikuku dị ọkụ 20 mm3 / 4 anụ ọhịa
Ọpụpụ mpụga mpụga 20 mm3 / 4 anụ ọhịa
Pipe mgbapụta enyemaka mpụga 25 mm1 inch
Mpụga odori anwụrụ 38 mm
1.5 anụ ọhịa Mpụga na-agbapụta anwụrụ 51mm2 anụ ọhịa ahụ
Mpụga ikuku ntinye ikuku 12 mm 1/2 anụ ọhịa
Oriri ikuku 3.5 m3/ h 124 cubic inch / awa
Nke gara aga: Runjin © Krunt ™ -N1200 Igwe Friji Igwe Friji
Osote: Runjin © Krunt ™ -EX800 Extrusion na Slicing Line maka Ice Ude